Removallọ ọrụ na-ewepụ ntutu - China Ndị na-ewepụ ntutu, ndị na-eweta ngwaahịa
Skin rejuvenation Acne iwepụ N'ihi lonlọ Mmanya Na-adịgide Adịgide Ngwaọrụ
IPL E-light Machine For Skin Skin Rejuvenation SHR Mbelata Mbelata
IPL Skin ume ọhụrụ
Kasị ọkụ Pulsed Light ma ọ bụ nke a maara nke ọma dị ka IPL bụ ọgwụgwọ anụ ahụ nke na-eji lasers, ọkụ ọkụ ọkụ, ma ọ bụ ọgwụgwọ photodynamic iji na-emeso ọnọdụ akpụkpọ ahụ ma wepụ mmetụta nke foto dị ka wrinkles, spots, and textures.
Ipl ntutu mwepụ 5 Wavelengths Ipl Portable Machine
Removal Iwepu ntutu isi na-adịgide adịgide: Akara mpụta, ntutu, egbugbere ọnụ, ma ọ bụ akụkụ ahụ ndị ọzọ.
Re Skin rejuvenation: Adalata pores, ikesiike ikpa, mma anụ ekwedo na gloss.
Removal Pigment mwepụ: wepu ọtụtụ pigments dị ka ntụpọ, chloasma, senile plaques, sunburn, were gabazie.
Multifunction Shr + elight + ipl Opt Super Ntịcha mwepụ igwe
600w 808nm Diode Igwe Mwepụ Ntutu
P-MIX 755 808 1064nm Diode laser mwepụ igwe bụ tumadi maka ọkachamara mwepụ ntutu.
Dị ka iwepụ ntutu egbugbere ọnụ, ntutu ajị agba, ntutu obi, ntutu akpa, ntutu aka na ntutu na-achọghị n'akụkụ ọ bụla. O kwesịrị ekwesị maka ụdị anụ ahụ na ntutu niile.
2000W 755 + 808 + 1064nm iwepụ ntutu laser
1200W 755 + 808 + 1064nm laser mwepụ igwe
2000W 808nm diode laser mwepụ igwe
HIDL-808-2000 jiri ike 808nm wavelength diode laser, nke nwere ike ịme ọgwụgwọ mwepụ ntutu maka ụdị anụ ahụ niile na ụdị ntutu nke ọma. Na aka aka, enwere ogwe laser 20 PC, ọ na-eji ogwe laser US Coherent. Oge ndụ abụghị oke ịgba, ịnwere ike iji ya oge niile. Na aka aka, enwere ihuenyo LCD, ọ nwere ike igosi ike na ọnụọgụ, dị mfe maka onye ọrụ ịme ọgwụgwọ.
1200W 808nm laser mwepụ igwe
HIDL-808-2000 jiri 808nm diode laser, jikọta ya na 2000W isi ike ọgwụgwọ dị elu. Kedu nke nwere ike ime ọgwụgwọ mwepụ ntutu maka ụdị anụ ahụ na ụdị ntutu ọfụma. Ngwa a bụ ihe ama ama n’ụlọọgwụ ntutu isi, ụlọ mma dị mma wdg.
Ọrịa Co2 Laser, Shr Opt Ipl Nwepu Ntutu, Co2 Fractional Laser Machine, otutu mwepụ mwepụ, Shr Ipl Opt, Ems Akwara mkpali Machine,